အပြင်မှာတွေ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Mask အတင်းချွတ်ခိုင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဖွေးဖွေး – Suehninsi
အပြင်မှာတွေ့ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Mask အတင်းချွတ်ခိုင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဖွေးဖွေး
Sue | September 5, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ဖွေးဖွေးက လက်ရှိခေတ် အနုပညာလောကမှာတော့ အအောင်မြင်ဆုံး မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်ကြောင့် ကျရာဇာတ်ရုပ်အတိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပြောင်းလဲပြီး သရုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာသက်တမ်း (၁ဝ) နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတင် အကယ်ဒမီဆု သုံဆုတိတိ ဆွတ်ခူးရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးထိပ်တန်းမင်းသမီးပီပီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို
လက်မလည်အောင် ရိုက်ကူးရတဲ့ ဖွေးဖွေးက လက်ရှိမှာတော့ ပြင်ပရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် သူမရဲ့ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူမကိုယ်တိုင် မလိုအပ်ပဲ အပြင်မထွက်သလို သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက်နေဖို့ အမြဲတမ်းမှာလေ့ရှိတဲ့ ဖွေးဖွေးက ဒီကနေ့မှာလည်း “ခုလိုချိန် မှာ မဖြစ်မ​နေ အပြင်သွားရလို့ Selfie ​လေးရိုက်မို့ mask
အတင်းချွတ်ခိုင်းတဲ့ တချို့သူ​ So-Called Fans တွေ က ကျွန်မကို တကယ်မချစ်လို့ပဲ! လို့သတ်မှတ်တယ်! မချွတ်​ပေးနိုင်ဘူး! ဒါပဲ! 😒 စိတ်​ကောက်တယ်။ ဒါနဲ့ Take Care My Beloved Darlings.. လွမ်း​နေမယ်… :’)” ဆိုပြီး အပြင်မှာ Selfie ရိုက်ဖို့ ခွင့်တောင်းရင် Mask အတင်းချွတ်ခိုင်းတဲ့ Fan တွေကို စိတ်ကောက်တယ်ဆိုပြီး ချစ်စဖွယ်ပြောထားတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာ အက်ဆီဒင့်တစ်ခုကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေကို အချိန်အတော်ကြာ ရပ်နားထားခဲ့ရသလို (၂၀၂၀) မှာလည်း ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် နှစ်တစ်ဝက်စာနီးပါး အလုပ်တွေ နားနေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖှေးဖှေးက လကျရှိခတျေ အနုပညာလောကမှာတော့ အအောငျမွငျဆုံး မငျးသမီးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ထူးခြှနျတဲ့ အနုပညာစှမျးရညျကွောငျ့ ကရြာဇာတျရုပျအတိုငျးကို စိတျရောကိုယျပါ ပွောငျးလဲပွီး သရုပျဆောငျနိုငျသူဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာသကျတမျး (၁ဝ) နှဈကြျောအတှငျးမှာတငျ အကယျဒမီဆု သုံဆုတိတိ ဆှတျခူးရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။ နာမညျကွီးထိပျတနျးမငျးသမီးပီပီ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေို
လကျမလညျအောငျ ရိုကျကူးရတဲ့ ဖှေးဖှေးက လကျရှိမှာတော့ ပွငျပရောဂါအခွအေနတှေကွေောငျ့ သူမရဲ့ အလုပျတှကေို ရပျနားထားရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး သူမကိုယျတိုငျ မလိုအပျပဲ အပွငျမထှကျသလို သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး ဂရုတစိုကျနဖေို့ အမွဲတမျးမှာလရှေိ့တဲ့ ဖှေးဖှေးက ဒီကနမှေ့ာလညျး “ခုလိုခြိနျ မှာ မဖွဈမနေ အပွငျသှားရလို့ Selfie လေးရိုကျမို့ mask
အတငျးခြှတျခိုငျးတဲ့ တခြို့သူ So-Called Fans တှေ က ကြှနျမကို တကယျမခဈြလို့ပဲ! လို့သတျမှတျတယျ! မခြှတျပေးနိုငျဘူး! ဒါပဲ! 😒 စိတျကောကျတယျ။ ဒါနဲ့ Take Care My Beloved Darlings.. လှမျးနမေယျ… :’)” ဆိုပွီး အပွငျမှာ Selfie ရိုကျဖို့ ခှငျ့တောငျးရငျ Mask အတငျးခြှတျခိုငျးတဲ့ Fan တှကေို စိတျကောကျတယျဆိုပွီး ခဈြစဖှယျပွောထားတာ
ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈမှာ အကျဆီဒငျ့တဈခုကွောငျ့ ရုပျရှငျရိုကျကူးမှုတှကေို အခြိနျအတျောကွာ ရပျနားထားခဲ့ရသလို (၂၀၂၀) မှာလညျး ကပျရောဂါအခွအေနတှေကွေောငျ့ နှဈတဈဝကျစာနီးပါး အလုပျတှေ နားနခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source : Phway Phway’s Facebook
အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
ယနေ့ည ဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှုလုပ်မယ့် မိခင်ဖြစ်သူအတွက် ပူပန်စိုးရိမ်နေရတဲ့ နီလန်း
မေသန်းနု နဲ့အတူ စိန်အရောင်းအဝယ်တွေလုပ်တုန်းက တစ်လကို သိန်း(၁၀၀၀)ဖိုးလောက်ရောင်းခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ စုရှိုင်း
အဖေဖြစ်သူရဲ့ (၅၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပွဲလေးကို ခြံထဲမှာပဲ မိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး